RASMI: André Silva oo dib ugu laabanaya kooxda AC Milan – Gool FM
(Yurub) 21 Maajo 2019. Weeraryahanka reer Portugal ee André Silva ayaa ku dhawaaqay inuu ka tagayo kooxda Sevilla dhamaadka xilli ciyaareedkan, kaddib markii uu ku qaatay mudo dhan hal xili ciyaareed ee amaah ah.
Sevilla ayaa xulasho u heysatay in si toos ah ay kaga iibsan karto André Silva AC Milan aduun dhan 35 milyan euro, laakiin kooxda reer Spain ayaa u muuqata inay go’aansatay inay iska fasaxdo laacibka reer Portugal.
André Silva ayaa fariin uu ku soo qoray boggiisa rasmiga ah ee Instagram-ka wuxuu ku sheegay:
“Waxaa dhamaaday xili ciyaareed kale, waxaan uga mahad celinayaa Sevilla sida quruxda badan ay ii soo dhaweeyeen”.
“Waxaan jecleystay niyada kooxda iyo magaalada, waxaan rajeynayaa in mustaqbalka ay ku guuleysan doonaan waxyaabo fiican”.
23 jirkan ayaa dhaliyay 7 gool, todobadii kulan ee ugu horeysay ee horyaalka La Liga dalka Spain, lakiin kaddib bilaabashadaas xooga badan wuxuu dhaliyay 2 gool oo qura.
Dhinaca kale weeraryahankii hore ee kooxda Porto ayaa u soo dhaliyay 10 gool, 40 kulan uu u saftay kooxdiisa AC Milan xilli ciyaareedkii 2017/2018.
“Ciyaartoyda waxay ka baqaan imaatinka kooxda Barcelona, sababa la xiriira Messi” - Rivaldo